Misiaha Amin’ny #Tenindreny ho Fankalazana Ny Fahasamihafam-Piteny Antserasera · Global Voices teny Malagasy
Misiaha Amin'ny #Tenindreny ho Fankalazana Ny Fahasamihafam-Piteny Antserasera
Voadika ny 19 Febroary 2015 3:10 GMT
Vakio amin'ny teny Deutsch, Español, عربي, বাংলা, Nederlands, русский, Swahili, Français, Català, srpski, Italiano, Aymara, English
Siokam-borona Sarin'i Id-iom ary nampiasaina ambanin'ny lisansa Creative Commons BY-NC 2.0.
Amin'ny fiteny manodidina ny 7000 iresahana manerana izao tontolo izao, dia ampahany kely dia kely ihany no hita amin'ny aterineto. Ao amin'ny sehatry ny Twitter, ny 85%-n'ny sioka no voasoratra amin'ny iray amin'ny fiteny valo monja, araka ny fanadihadiana iray natao – ka tsy manome endrika loatra ny fahasamihafana ara-kolontsaina sy ara-pitenenana eto amin'ny planeta.
Na dia mihamaro aza ny vondrom-piarahamonina manomboka mahita ny fahafaha-mizara ny fiteniny antserasera, dia mbola maro ny azo atao ho fanairana sy hanasongadinana ireny ezaka ireny. Amin'ny Andro Iraisampirenena hoan'ny Tenin-dreny hotontosaina amin'ny 21 Febroary, ny Rising Voices, miaraka amin'ny mpiara-miombon'antoka mpanomana toy ny Living Tongues Institute, Endangered Languages Project, ary ny Indigenous Tweets, sy ireo mpiara-miombon'antoka hafa mandray anjara, no miaraka hanomboka ny fanentanana “Tweet in Your #MotherLanguage.” [Misiaha amin'ny #Tenindreny ilay anao]
Amin'ny alalan'ity fanentanana antserasera ity, tianay ny hankatò sy handrisika ireo mpisera aterineto izay mizara ny tenin-dry zareo ao amin'ny Twitter ka mifantoka manokana amin'ny fiteny teratany sy ireo fitenin'ny vitsy an'isa, ary ireo rehetra ireo mety ho tsy voasolotena tsara antserasera.
Mora tontosaina ny fandraisana anjara :
Dingana 1 – Misiaha amin'ny fitenin-dreninao
Tweet [sioka-bitsika] mampiasa ny tenindreninao mandritra ny tontolo andro
Zarao “Nahoana no zava-dehibe ny mampiasa ny fiteninao amin'ny aterineto?”
Misiaha teny fiarahabana na teny na fehezanteny ankamamianao amin’ny fiteninao
Misiaha dikanteny handrisihana ireo mpiteny avy amin'ny vondro-piarahamonina hafa teratany sy vitsy an'isa
Dingana 2 – Ampio Hashtags na Diezy
Ampio hashtag na diezy #MotherLanguage na/sy #TenindReny
Ampio hashtag na diezin'ny fiteny (ohatra #Malagasy #Lakota, #Yoruba)
Step 3 – Mandraisa Anjara Amin'ny Resadresaka!
Karohy ny hafa mampiasa ny diezy #Tenindreny (#MotherLanguage) dia ampitao izany (ataovy retweet
Karohy ny hashtag/diezy/tenifototra amin'ny fitenindreninao dia araho ny hafa misioka amin'izany fiteny izany
Mifandraisa amin’olona hafa mankalaza ny fahasamihafan’ny fiteny
Raha te-hahita antsipirihany amin'ny fomba andraisana anjara, dia jereo ny habaka fanentanana.
Nahoana Ianao No Hisioka Amin'ny #TenindReny?
Na dia mitombo isa aza ireo fiteny ampiasaina an-tserasera, dia mbola maro ireo vondrom-piarahamonina no miatrika fanamby maro rehefa miezaka ny hifandray amin'ny alalan'ny media sosialy. Misy ireo fiteny sasantsasany izay tsy manana kitendry ahafahan'ny mpisera manoratra amin'ny fiteniny, ary faritra maro amin'izao tontolo izao no mbola tsy manana seraseran-davitra sahaza, ka mahatonga azy ireo ho lasa ivelan'ny fifampiresahana antserasera.
Na izany aza, efa nanaporofo ny fifandraisana an'aterineto fa manana anjara toerana lehibe amin'ny fitehirizana sy famelomana indray ny fiteny. Maro ireo fitaovana nomerika mora ampiasaina manamaro ny isan'ny olona hanangana votoaty amin'ny fiteniny, sy ahafahan'ireo mpiresaka amin'io fiteny io hifandray, tsy ijerena ny fahalaviran-tany.
Ity fanentanana ity dia hampisongadina ny asan'ireo vondron'olona maro na ireo olona mandeha tsirairay manolo-tena ny hisera amin'ny fiteniny ato amin'ny aterineto, ary ny maro amin'izy ireo dia heverina ho “mpikatroka nomerikan'ny fiteny” noho ny anjara toeran'izy ireo amin'ny fampifandraisana ity fisaharana ity sy handrisihana ny taranaka vaovaon'ny mpiteny azy. Tsara vitana isika noho ny fandraisana anjaran'ireo “masoivoho” tahaka an'i Rodrigo Pérez (@ISF_MX) avy any Meksika, izay misioka tsy tapaka amin'ny fiteny Zapotec sy tahaka an'i Ignacio Tomichá Chuve (@MonkoxBesiro) avy any Bolivia, izay misioka tsy tapaka amin'ny fiteny Bésiro (Chiquitano), izay namorona ireto lahatsary ireto izay manasa anao handray anjara amin'ny fanentanana. Efa an-dalam-panatontosana ny azy ihany koa ireo masoivoho hafa ary hampiana ao anatin'ny lisitry ny rakitsary ireny :
Soa fa nisy ny fanampian'olona maro manerana izao tontolo izao fa efa voadika amin'ny fiteny mihoatra ny 25 ankehitriny ny habaka fanentanana, ary tafiditra amin'izany ny Odia, Sena, ary ny Lezgian. Ny maro amin'ireo fandikanteny ireo dia avy amin'ny mpikamban'ny Tetikasa Lingua ato amin'ny Global Voices, vondron'ireo mpandika teny mpirotsaka an-tsitrapo.
Noho ny fanampianao dia azontsika atao ny manamboatra ny lalana mankany amin'ny fankalazana ny fahasamihafam-pitenenana maro kokoa amin'ny aterineto, fa tsy mankany amin'ny fanaovana an-jorombala. Ny takiana amin'izany rehetra izany dia sioka na fampitan-tsioka!